World Environment Day, June5– Hakha Cherry
Vawleicung Pawngkam Runven Ni ah Democracy ram dirh thannak, ram ca ah nunnak petu hna le nunnak thaap inacawlcang cuahmah mi hna upat pek can ah tutan WED tlaihtlaih cu “Green Campain”asi bantuk in mah duh mi thingkung cio cin (phun) ding ah NUG nih sawmnakatuah.
မြန်မာနိုင်ငံသား တိုင်းရင်းသားပြည်သူညီအစ်ကိုမောင်နှမများခင်ဗျာ….လာမယ့် ၅-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့ ဟာကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ (World Environment Day) ဘဲဖြစ်ပါတယ်၊
ထို့နေ့မှာ ပျက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့ ဂေဟစနစ်များနဲ့ အာဏာရူးတသိုက်ကြောင့် ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ ဒီမိုကရေစီတို့ကို ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရန်နှင့် နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ ကျဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်များနဲ့ လက်ရှိ တွန်းလှန်နေတဲ့ လူမျိုးဘာသာ အလွှာမျိုးစုံကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေဖြင့် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ သစ်ပင် /သီးပင် စားပင်/ အရိပ်ရပင်/ပန်းပင် စိုက်ပျိုးကြရင်း စစ်အာဏာရှင်ကို တွန်းလှန်ကြောင်း လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်ပေးကြဖို့ ပြည်သူတဦးတယောက်ချင်းစီအား ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေဗျာ၊
၅-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ကျဆုံးသူရဲကောင်းများနဲ့ တော်လှန်ရေးတွင်ပါဝင်နေသူများအား ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ မိမိတို့ပါဝင် သစ်ပင်စိုက်ပျိုးနေသည့်ဓာတ်ပုံများကို လူမှုမီဒီယာများတွင် မျှဝေပေးနိုင်ပြီး ပါဝင်လှုပ်ရှားသည့် ဓာတ်ပုံများကို ကျနော်တို့ ဖေ့စ်ဘွတ်စ်စာမျက်နှာရဲ့ chat box သို့ပေးပို့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ၊
ပေးပို့လာသည့်ပုံများအနက် အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံ ၂၀ ခန့်ကိုရွေးချယ်၍ ကျနော်တို့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာပေါ်တွင် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်၊ ​ပေးပို့လာ​သောဓါတ်ပုံများကို လုံခြုံ​ရေးအ​တွက် ထိခိုက်မှုမရှိ​စေ​ဘဲ စနစ်တကျ တင်ပြ​ပေးသွားမှာ ဖြစ်တဲ့အ​ကြောင်း အသိ​ပေးလိုပါတယ်၊
ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ (WED) လူထုလှုပ်ရှားမှုတွင်ပါဝင်ကြပါစို့ WorldEnvironment Day2021 Generationrestoration Myanmar Spring Revolution Green campaign
Mindat peng ralzam ei dinaphor mi2le midang4an Tlaih.May2ah Mindat ralzam bawmhnakaphor mi2cu mawtaw he an tlaih, an pa le nih amahkhan dingin an va kal nain an rak kir rih lo tiah Zalen News nihati.
A dang2hna cu La Bang tiah theih mi le AGD bank riantuan mi hna an si.
La Bang an ti mi hi Moekaungkin lakphak dawr ah an tlaih. AGD bank ah riantuan mi cu bank ahaum lio ah an lut hnawh i an tlaih tiah Zalen News nihati.zelen
Mindat peng ralzam ei dinaphor mi2le midang4an Tlaih
CDF-Mindat nih SAC ralkap7hrawng kahthah,4hliamh